अपाङ्गको पहुँचबाहिर 'सूचना प्रविधि'
मार्च १४ । विश्वले भौतिक विज्ञानका महान् वैज्ञानिक स्टेफन हकिगंको भौतिक शरीर गुमाएको दिन । आफ्नो जीवन नै ब्रम्हाण्डको खोज अुनसन्धानमा बिताएका हकिङ २१ वर्षकै उमेरमा ‘मोटर न्युरोन’ नामको रोगबाट शिकार भए । डाक्टरहरुले उनलाई २ वर्ष मात्रै बाँच्ने आशा गरेका थिए । रोगकै कारण शरीरका अंगहरु नचल्ने भए । सिङ्गो स्नायु प्रणालीमा नै रोगले आक्रमण गर्यो ।
हिँडडुल, बोलचाल गर्न नसक्ने भए । आफ्नो शरीर नचलेर के भो त ! एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो दिमागी क्षमतालाई विश्वसामु फैलाउन हकिङ सफल भए । हकिगंको यो अद्भूत क्षमतालाई संसारले चिन्यो । हकिगं यसरी सफल हुनुमा मुख्यतः प्रविधिकै हात थियो । ह्विलचेयरबाट हिँडडुल गर्नदेखि आफ्ना कुरा अरुलाई सुनाउन उनी विभिन्न सफ्टवेयरको सहारा लिन्थे ।
हकिगं एउटा यस्ता उदाहरण हुन्, जसले प्रविधिमार्फत् विश्वकै विज्ञान युग हाँके । शारीररिक रुपमा अपागंता भएका व्यक्तिहरुले दैनिक जीवनमा मात्रै होइन, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी तथा अन्य विभिन्न कामहरु सपागं व्यक्तिहरुले जत्तिकै गर्न सकेका छन् । आज विश्वमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत अपागंता भएका व्यक्तिहरु छन् ।
‘आज एसेस्टिभ टेक्नोलोजीकै प्रयोगले शारीरक रुपमा अपागं भएका व्यक्तिहरुले असाधारण काम गर्न सकेको उदाहरण हामीसँग प्रशस्तै छ,’ राष्टिय अपागं महासंघका पुर्व अध्यक्ष डा. विरेन्द्रराज पोखरेल भन्छन् । ‘इच्छा र जाँगर हुनुपर्छ । प्रविधिको पहुँचमा हुनेहरु परनिर्भर हुनुपर्दैन,’ पूर्ण दस्टिविहीन रहेका उनले भने, ‘प्रविधिले दैनिकीमै आमूल परिवर्तन ल्याइदिएको छ । हिजोसम्म घरमै सिमित अपागंता भएका व्यक्तिलाई परिवारले बोझको रुपले लिन्थे । अहिले अपागंहरुलाई सजिलो हुने गरी आइटीका डिभाइस आएका छन्, जसले उनीहरुको जीवनस्तर मात्रै उकासेको छैन, उदाहरणीय कामहरु पनि गरिरहेका छन् ।’
नेपालमा पनि आँखा नदेख्ने वा कम देख्नेहरुका लागि स्किृन रिडर सफ्टवेयर, स्पिच टु टेक्स्ट, नेपाली ओसिआर तथा एक्सेसिबल वेबसाइट र कन्टेन्टको प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ । त्यस्तै आइसिटीमार्फत् बहिराहरुले चित्र हेरेर, न्यारेशन पढेर वा अन्य सांकेतिक भाषाहरुमार्फत् सञ्चार गर्न, पढ्न र अन्य काम गर्न सक्छन् । प्यारालाइसिस भएर शरीर नचल्ने व्यक्तिहरुले भ्वाइस सिन्थेसाइजर आफ्ना कुरा राख्न सक्छन् ।
वैशाखी टेकेर हिँडडुल गर्नुपर्ने व्यक्तिका लागि इलेक्ट्रोनिक ह्विलचेयरसमेको विकास भएको छ । यसर्थ हामीले कल्पनै गर्न नसक्ने गरी अपागंता भएका व्यक्तिहरुका लागि प्रविधिहरुको विकास र प्रयोग हुने क्रम बढेको छ । यसले मानिसहरुमा काम र क्षमताका हिसाबमा कुनै भिन्नता रहेको छैन ।